Ny sandan'ny fianakaviana Kardashian-Jenner 2022 - Victor Mochere
Ny fianakaviana Kardashian-Jenner dia iray amin'ireo fianakaviana malaza indrindra, manan-danja ary manankarena indrindra eto an-tany. Tsy takona afenina fa milomano vola ny fianakaviana. Teo anelanelan'ny orinasa tsy tambo isaina, ny fifanarahana fankatoavana ary ny fisehoana karama, dia nivadika ho milina fitadiavam-bola ity fianakaviana ity. Misy milaza fa malaza amin'ny laza izy ireo, fa ny Kardashians sy Jenners dia mihodinkodina amin'ny koba satria marani-tsaina sy mahay raharaham-barotra.
Ny fianakaviana Kardashian-Jenner dia manana tombana netina $ 3.17 miliara.
$ 190 tapitrisa
$ 100 tapitrisa
$ 65 tapitrisa
$ 50 tapitrisa
$ 10 tapitrisa
$ 2.5 tapitrisa
Kris Jenner Harena Net 2022
Will Smith Worth Net 2022